बिहान ६ बजे देखि ९ बजे सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरुको भाग्य कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com बिहान ६ बजे देखि ९ बजे सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरुको भाग्य कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् ! - खबर प्रवाह
बिहानको प्रथम प्रहर
दिनको पहिलो प्रहर सूर्योदयसंगै सुरु हुन्छ जसलाई पूर्वान् भनिन्छ। यसलाई दिनको पहिलो प्रहर पनि भनिन्छ। यो प्रहर बिहान ६ देखि ९ बजेको बीचमा हुन्छ। यो प्रहर आंशिक सात्विक र राजसिक हुन्छ , तर नकारात्मक भने हुँदैन । यस प्रहरमा जन्मेका व्यक्तिले जीवनमा ठूलो प्रगति गर्छन्। यस प्रहारमा जन्मेका मानिसहरु निकै बुद्धिमानी र सत्यवान हुन्छन्। तर, उनीहरुको जीवनको सुरुमा भने स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ।
यो प्रहरमा के गर्नुपर्छ त
यस प्रहरमा सुत्न वा संभोग गर्न हुँदैन । यो प्रहरमा कुनै पनि प्रकारको रिस र क्रोधलाई टाडा नै राख्दा राम्रो हुन्छ , अन्यथा यसले दिमागमा नराम्रो असर पार्छ साथ साथै भविष्यमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यस प्रहरमा नराम्रो शब्दहरू बोल्न वा गृह कलह गर्नु पनि राम्रो होइन । घरमा कुनै पनि फोहोर गर्नु हुँदैन । यदि यस समयमा घरमा चन्दन र गुलाबको सुगन्ध फैलायो भने घरमा खुशी र शान्ति रहन्छ।